I-PayStand: Yamkela amakhadi etyala ngaphandle kweNtlawulo yeNtengiselwano | Martech Zone
I-PayStand: Yamkela amakhadi etyala ngaphandle kweNtlawulo yeNtengiselwano
NgoLwesibini, Aprili 15, 2014 NgoLwesibini, Oktobha 7, 2014 Douglas Karr
Xa ndidibanisa inkqubo yethu yokufaka invoyisi kunye nokulungiswa kwamakhadi etyala ndothuke kakhulu yindlela eyayintsokothile ngayo kwaye ingakanani imali abayithathayo kwimicimbi yentengiselwano. Emva koko ndothuka ukuba kufuneka ndifumane iinkqubo ezimbini… iprosesa yekhadi letyala kunye neakhawunti yomthengisi. Olona loncedo ndandinalo kukuba bendinokukwenza kunye nebhanki yam - kodwa kunjalo baxhoma imali kwiintsuku ezimbalwa ukunyusa inzala yabo. Ugh.
Hlawula isandula ukwenziwa kwaye inokutshintsha ishishini. I-Paystand ikuvumela ukuba ufumane imali kwiwebhusayithi yakho nakunxibelelwano lwasentlalweni ngaphandle isoftware eyongezelelweyo, ukufaka iikhowudi okanye kufuna iakhawunti yomthengisi. Yamkela amakhadi amakhulu etyala, i-eCheck, kunye ne-eCash zonke nge akukho ntlawulo yokuthenga umbutho wakho.
Hlawula kubandakanya ezi zinto zilandelayo:
IiWebhusayithi ezakhelweyo ngaphakathi -Uyilo ngalunye ngokuzenzekelayo lubandakanya amava awodwa eselfowuni ahambelana nesimbo sakho sePayStand, ke umxholo wakho uya kujongeka ulungile kwizixhobo zonke, ngalo lonke ixesha.
Amakhonkco eSmart -Into nganye oyenzayo inikezela ngekhonkco eyaziyo ukuba ivulwa phi. Yabelana ngekhonkco yakho efanelekileyo kwi-Facebook, kwiPinterest, ku-Twitter, nge-imeyile, okanye kwiwebhu.
Ulawulo loMyalelo -Ukulandelela iiodolo, phendula abathengi, thumela iirisithi ezinombhalo omhlophe, uluhlu lweempahla, unxibelelane ngolwazi lokuhambisa kunye nokunye.
Imigca yeeVenkile ezininzi -Shumeka iPayStand yakho kwiwebhusayithi yakho, iphepha lakho lewebhu lePayStand, iFacebook, iTumblr, iWindowsPress, okanye naphina. I-PayStand ilawula yonke iodolo yakho endaweni enye, kuzo zonke iivenkile zakho zokugcina.
Iindidi ezininzi zezinto -Bonelela ngeentlobo ezininzi zezinto zonke kwiphepha lakho lekhathalogu. Thengisa kwaye uthumele izinto ezibonakalayo, ulayishe izinto zedijithali ukuze uzithengise, uthathe iintlawulo, okanye wamkele iminikelo.
Simahla i-PayStand WebStore -Umsebenzisi ngamnye wePayStand ufumana eyakhe iPayStand kwi-Intanethi iphepha leWebhu kunye nedilesi eyahlukileyo ye-url.
Thenga ngoku amaqhosha kunye nokushumeka kweWebhusayithi -Ukongeza ii-Buttons ngoku okanye ukufaka i-PayStand yakho kwindawo yakho kulula njengokulahla ividiyo ye-Youtube.
Ukuphendula ngokuThatha iMifanekiso -I-PayStand ivumela imifanekiso emininzi yento nganye enikiweyo kwaye ivelise iinguqulelo ezininzi ezilinganisiweyo kwifayile nganye yemifanekiso elayishiwe. Umlayishi wethu womfanekiso ubhaqa kwaye ukhethe ubungakanani bomfanekiso ofanelekileyo ukuba uza kulayishwa kuso sonke isixhobo nakwiskrini-kubandakanya izixhobo ze-Apple ezineeRetina Displays.
Izixhumanisi Zentlalo -Bonisa ngokuzenzekelayo amakhonkco onxibelelwano lwentlalo kunye nento nganye eyenziweyo, ukuvumela iindwendwe zakho ukuba zabelane kwaye zithethe ngawe kwinethiwekhi nganye enkulu. Abathengi bakho banakho ezifana wena kunye isabelo kwiirisithi zabo.
Ukudibanisa ngqo iphepha leFacebook -I-PayStand ikunika isicelo sasimahla seFacebook esidibanisa namaphepha akho e-Facebook. Abathengi bakho bathenga ngqo kwi-Facebook ngaphandle kokushiya iphepha lakho (elinceda ukuthintela ukulahleka kwentengiso).
Izinto ezahlukeneyo Yenza izinto ngokwezifiso, iintlawulo, okanye iminikelo ngeendlela ezahlukeneyo ezifana nobungakanani, umbala, uhlobo, okanye ingxowa-mali. I-PayStand ikuvumela ukuba usete ixabiso kunye nokulandelela uluhlu lwezinto onokuzenza ngokwezifiso zakho.
Ukuthumela / Ukwabelana ngokuBanzi -Sebenzisa isixhobo sePayStand's Universal Posting ukuze wabelane ngokulula ngezinto zakho kuwo onke amaqonga ezentlalo kunye nejelo lonxibelelwano ngaxeshanye. Ezona ndawo umkhulu kuzo ziya kubakho abaphulaphuli bakho.
Isisombululo esinye-ku-nye -Yonke into oyifunayo ukuthatha intlawulo kwaye uyithengise kwi-intanethi Yonke into ifakiwe. Akukho akhawunti eyongezelelweyo yokubamba, iiprosesa zokuhlawula, iiakhawunti zomthengisi, uyilo lwewebhu, iinkqubo, isoftware yolawulo lweodolo, okanye ezinye iintloko eziqhelekileyo eziyimfuneko!
Ukunyuswa kweVidiyo - yongeza ividiyo kwinkcazo yoluhlu lwezinto usebenzisa i-Youtube okanye bedlala khipha ikhowudi.
Uyilo oluPhendulayo ngokuzenzekelayo -Amaphepha onke e-PayStand ayaphendula kwaye asebenza nakwesiphi na isixhobo esiphathwayo, ii-iPads, okanye ubungakanani bescreen sekhompyuter kunye nesisombululo.
Iinkcazo zento yesiqhelo yongeza iinkcazo zezinto ezikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso iifonti yakho, imihlobiso yokubhaliweyo, imifanekiso, amakhonkco, iividiyo kunye nokunye.
Unxibelelwano ngqo nabaThengi -I-PayStand ikunika iidilesi ze-imeyile kunye needilesi zokuhambisa ukuze uthengise abathengi bakho.
Inkxaso yababhali abaninzi -Vumela abantu abaninzi ukuba bancede ekulawuleni nasekuqhubeni iiakhawunti zakho zePayStand.
tags: iprosesa yekhadi letyalaukuhlawulaumrhumo wentengiselwanoIpesenti zero
IMassiveImpact: Iindleko ngeNtshukumo nganye ngeNethiwekhi yeNtengiso yeNtengiso
UNancy Myrland, uMyrland uMarketi
Epreli 15, 2014 ngo-3: 36 PM
Ndiyayithanda le nto, Doug! Ndiza kuyiphanda ngakumbi kuba le yenye yezinto zokugqibela endiyeke zandicothisa ekumiliseleni kwi-Intanethi. Ungogqibelele!
Epreli 21, 2014 ngo-1: 50 PM
Ngaba oku kungasetyenziselwa ukunyusa umnikelo wephulo lezopolitiko?